5 ဥရောပမှာတော့နာမည်ကြီးရုံ | တစ် ဦး ရထားခရီးသွားဥရောပကို Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား >5ဥရောပမှာတော့နာမည်ကြီးရုံ
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 14/02/2020)
ဥရောပ၌ကျော်ကြားရုံဥရောပယဉ်ကျေးမှု၏ထည်သို့ယက်နေကြ. ဥရောပ၌နာမည်ကြီးရုပ်ရှင်ရုံသင်သည်ထူးခြားသောတင်ဆက်မှုကတိပေး. ဒါဟာနှိုးဆော်သင်ချန်ထားမည်, ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့် spellbound! အနုပညာဖျော်ဖြေ၏သဘောသဘာဝ spectacularly ခဏနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုယ်ကဖြစ်ပါတယ်. ထက်မြက်၏ဤအတောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှတ်တရများအတွက်သာအသက်ရှင်. ဥရောပ၌နာမည်ကြီးရုပ်ရှင်ရုံသီးသန့်နှင့်ရှားပါးတစ်သဘောမျိုးဖန်တီး. ဒါဟာခွဲဝေမှုကာလ၌အကျဉ်းအခိုက်ဖြစ်ပါသည်, သငျတို့သသည်၎င်း၏အလင်းရောင်၏အလငျး၌လှုံချင်ပါလိမ့်မယ်.
1. Teatro alla Scala, အီတလီ
ဒါဟာကျွန်တော်အီတလီမှာစတင်မယ်လို့သာယုတ္တိပုံရသည်, ဥရောပတိုက်တွင်နာမည်ကျော်ရုပ်ရှင်ရုံအပေါ်တစ်ဦးကွီးသြဇာလွှမ်းမိုးမှု. အဆိုပါ Teatro alla Scalla အီတလီအော်ပရာ၏ကမ္ဘာကျော်နေရာဖြစ်သည်.
အများစုကအတိတ်၏အကြီးအအဆိုတော်တွေ၏, ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ရာနှစ်ကျော်, ဤနေရာတွင်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြ. အတော်များများကကျော်ကြားသရုပ်ဖော်ဇာတ်လမ်းထိုကဲ့သို့သောအျောသဲအဖြစ်ကဒီမှာသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးထုတ်လုပ်မှုခဲ့ကြ, Giacomo Puccini အားဖြင့် Verdi နှင့် Madame လိပ်ပြာများက Nabucco.
ဤသည်ပြဇာတ်ရုံခမ်းနားလှပဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာသင်ပုံမှန်အားဖြင့်အများပြည်သူပွင့်လင်းမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုပုဂ္ဂလိကဒေသများ peruse နိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာပြတိုက်ရှိပါတယ်. အဆိုပါကြီးမားခနျးသစ်သားထံမှဆောက်လုပ်ထားသည်ဆယ်စုနှစ်အနီရောင်ကတ္တီပါဖုံးလွှမ်းနေသည်. ဒါဟာ Bohemian ကြည်လင် chandelier အားဖြင့် lit ဖြစ်ပါတယ်.
2. အဆိုပါကမ္ဘာလုံးပြဇာတ်ရုံ, လန်ဒန်
အဆိုပါကမ္ဘာလုံးပြဇာတ်ရုံရှိတ်စပီးယားကမ္ဘာလုံးအဖြစ်လူသိများသည်. အဆိုပါ Bard ၏ Insatiable ပရိတ်သတ်တွေဥရောပ၌ဤကျော်ကြားပြဇာတ်ရုံသို့သွားရောက်ရမည်ဖြစ်သည်. ဝီလျံရှိတ်စပီးယားအကျင့်ကိုကျင့်သောလူ့သဘောသဘာဝတစ်နက်ရှိုင်းသောနားလည်မှုကိုပြသ. သူ့အလုပ်သိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသောပရိသတ်များအတွက်. အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသူ့ရဲ့ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာကသူ့ပြဇာတ် လုပ်. ပါရမီ၏ timeless အပိုင်းပိုင်း poems ထားပါတယ်.
သငျသညျရှိတ်စပီးယား၏ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ရောက်နေတယ်ဆိုရင်, ဒီကျိန်းသေအဆိုပါဖြစ်ပါသည် အလည်အပတ်ဖို့ရာအရပျ! သခင်ဘုရားသည် Chamberlain အမျိုးသားများအတွက်ကြောင့်ချမီးရှို့ရာ 1613. ယနေ့က၎င်း၏အရပ်ဌာန၌ရပ်တည်သောခေတ်သစ်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးမူရင်းတည်နေရာမှတိုတောင်းတဲ့အကွာအဝေးဖြစ်ပါသည်.
ဒီသုံးခု-ပုံပြင်ထံသို့လာကွ, ပြဇာတ်ကိုခံစားဖို့ Open-ဝေဟင်ပွဲကြည့်စင်. အလုပ်ရုံများတွင်ဆက်ဆံ. ပို့ချချက်အပေါ်စစ်-In နှင့်ဖတ်ဆန္ဒပြ. အဲဒီမှာရေတွင်းတစ်တွင်း-တက်ရောက်ခဲ့သည်ပြဇာတ်အစီအစဉ်ကိုအားလုံးတစ်နှစ်ပတ်လုံးနှင့်ဥရောပ၌ကျော်ကြားရုပ်ရှင်ရုံများ၏စာရင်းအပေါ်တစ်ဦးမဖြစ်မနေဖြစ်ပါသည်.
3. Paradis နဲ့လက်တင်, ပဲရစ်
အဆိုပါ Paradis နဲ့လက်တင်မူရင်းလက်တင်ပြဇာတ်ရုံ၏ဆက်ခံသောခေတ်ပြိုင်ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲကျင်းပရာနေရာဖြစ်ပါသည်. လက်တင်ပြဇာတ်ရုံဟာ 1800 ခုနှစ်နပိုလီယံဘိုနာထက်အခြားအဘယ်သူမျှအားဖြင့်မူလကတာဝန်ခဲ့သည်.
အတော်များများကအဆောက်အဦများကြောင့်အချိန်ကာလအတွင်းချမီးရှို့ရာ. ဒီတစျခုပါဝင်သည်. ယင်း၏ glitz နှင့်အသွင်များအတွက်ကျော်ကြားတဲ့, ဒါကြောင့်သင်ပြဇာတ်ရှာနေလျှင်, သင်တစ်ဦး bonafide Parisian ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲရှိုးမှာတှေ့လိမျ့မညျ. ထူးချွန်ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲဖျော်ဖြေပွဲနှင့် တွဲဖက်., သင်သည်လည်းခြွင်းချက် Acrobat နှင့်ကောင်းကင်ဘားလုပ်ရပ်များတွေ့နိုင်ပါသည်.
4. Volkstheater, ဗီယင်နာ
ဗီယင်နာအတွက် Volkstheater တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် လှပသောမျက်မှောက် ကှ္ဂျကှ္ဂျမှ. ပထမဦးဆုံး၌ဖွင့်လှစ် 1889. ဒါဟာကမ္ဘာပေါ်မှာဂျာမန်စကားပြောနိုင်ငံများကတလျှောက်လုံးသူ့ရဲ့ကြင်နာ၏အကြီးဆုံးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်တစ်ဦးကိုတွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်သည်ဖြစ်ပါတယ်.
အဆိုပါ Burgtheater တစ်ဦးထက်ပိုသောလက်လှမ်းရှိသော counterpart အဖြစ်တည်ဆောက်ခဲ့သည်, ကမြင့်မားသောလူ့အဖွဲ့အစည်းများအတွက်အချိန်ကရွေးချယ်သောနေရာဖြစ်ခဲ့သည်ပေမယ့်လူတိုင်းခံစားရန်အဘို့အအနုပညာဖျော်ဖြေဖြစ်ပါသည်. ဒီဘုနျးကွီးသောပြဇာတ်ရုံ၏အစမှာ, အာရုံသြစတြီးယားစာရေးဆရာများအပေါ်ခဲ့သည်. ယနေ့တွင်, သငျသညျအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကောင်းချီးလက်ခံရရှိခဲ့သည်တစ်ခုကျယ်ပြန့် repertoire ဖို့သကျသခေံဖွစျစနေို.
အဆိုပါ Rote ဘားပြဇာတ်ရုံ၏အထက်ပိုင်းကြမ်းပြင်ပေါ်မှာဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာ decidedly ပိုပြီးတရားဝင်နေရာဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာသင်ပတ်ဝန်းကျင်သီချင်းနားထောင်နိုင်သောဒီမှာ, စာဖတ်ခြင်းနှင့်ခေတ်ပြိုင်ပြပွဲအဖြစ်ကလပ်ဖြစ်ရပ်များကိုခံစားအဖြစ်ကောင်းစွာ.
5. အဆိုပါအမျိုးသားကဇာတ်ရုံ, ပရာ့ဂ်
ဒါဟာပရာ့ဂ်အမျိုးသားပြဇာတ်ရုံချစ်စနိုးထားပြီးကြောင်းအံ့သြစရာမရှိပါဖြစ်ပါတယ်, အဆိုပါ Golden Chapel. ဒါဟာသူ့ရဲ့ Neo-Renaissance ဘုန်းအသရေ၌ရှိသမျှအတွက်ဂုဏ်ယူစွာရပ်တည်. သငျသညျဥရောပ၌ဤကျော်ကြားပြဇာတ်ရုံသို့သွားရောက်သည့်အခါသင် nobility ကိုယ့်ကိုယ်ကို၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းကဲ့သို့သင်တို့ခံစားရပါလိမ့်မယ်.
အဆိုပါအမျိုးသားကဇာတ်ရုံသည် သမိုင်း၌ငွေရတတ်သော ဒါပေမယ့်မူရင်းအဆောက်အဦးအတွက်ချမီးရှို့ရာ 1881. တစ်ခုတစ်ခုလုံးကိုလူမျိုးကိုဖျော်ဖြေအနုပညာများ၏ထောက်ခံမှုအတွက်အတူတကွဖေးမ. သူတို့ကပြန်လည်ဆောက်လုပ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်တစ်ချိန်ကခဲ့တာအတိအကျကြောင့်ရှိခြင်းမှလှူဒါန်းခဲ့.
ယနေ့တွင်, ဘဲလေး၏အံ့မခန်းအမျိုးမျိုးလာကြည့်, ပြဇာတ်, နှင့်လာအောင်နှိုးဆွခြင်းနှင့်မွေ့လျော်ကြောင်းသရုပ်ဖော်ဇာတ်လမ်း, နှင့်သင်တန်း, အတူစီးနင်းဖမ်း တစ်ဦးကရထား Save အဲဒီမှာရဖို့!
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “5 ဥရောပမှာတော့နာမည်ကြီးရုံ” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ffamous-theatres-europe%2F ‎- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
#ပြဇာတ်ရုံ ချစ်သူ မင်္ဂလာပါ Teatro alla Scala ပြဇာတ်ရုံ TheGlobeTheatre ရထားခရီးသွား Volkstheater